Belgium Oo Xaqiijisay Amaanka Wadanka Si aaysan Wax U Dhicin – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaBelgium Oo Xaqiijisay Amaanka Wadanka Si aaysan Wax U Dhicin
21/11/2015 Wararka Soomaalia 0
Wadanka Belgium ayaa sare u qaaday Xaga Amanka Wadanka Si aay uga hortagga argagixisada magaalada Brussels, iyagoo ka digay in ay dhici karto qatar dhow.
Tareenada dhulka hoostiisa mara ee Brussels iyo qadad kale, ayaa ugu yaraan la xiray ilaa axadda.
Dadka, ayaa lagula taliyay in ay ka fogaadaan meelaha laysugu yimaado oo ay ku jiraan xarumaha dukaamada iyo bandhigyada. Waxayna madaxdu ku taliyeen in la joojiyo munaasabadaha waaweyn, sida tartamada ciyaaraha kubadda cagta.
Magaalada Brussels’ ayey ka socdeen baarista xagjiriintii ka dambeeyay weeraradii Paris. Mid ka mid ah kuwa la raadinayo -Salah Abdeslam- ayaa la rumeysan yahay inuu Belgium ku laabtay.
Tababaraha kooxda Liverpool ayaa yiri Waxba kama aqaano Raheem Sterling